(ကျွန်တော် ပုဇွန်ထုပ်ဆိုလုံးဝမစားတော့ပါ) - Lastest and Trustest News
ကျွန်တော် ပုဇွန်ထုပ်ဆိုလုံးဝမစားပါ ပုဇွန်အကောင်သေးရင်တော့စားသည် ပုဇွန်ထုပ်ကိုစိတ်နာ သွားသည့် အကြောင်းရင်း ကတော့ မအူပင်ဘက်ကရွာေ လးတစ်ရွာကို အလုပ်ကိစ္စတခုကြောင့် လုပ်ဖော်ကိုင် ဖက်ငါးယောက် နဲ့ ခရီးထွက်ဖြစ်ရာမှစသည် တည်းမည့်အိမ်ရောက်တော့ အကုန်လုံးခြေပစ် လက်ပစ်နားကြ ရေချိူးကြနဲ့ နေ့ လယ်စာစားချိန်နီး သွားလေပြီ အိမ်ရှင်ကဧည့်ဝတ်ကျေ တာမှ ဟိုဖက်တောင်လွန်သည်
ပုဇွန်ထုပ်အကောင် ကြီးတွေအကောင်သုံး ဆယ်လောက်ကို တစ်ဝက်ချက်တစ် ဝက်သုပ် မီးကင် အချဉ်ဟင်း ငပိရည် တို့စရာနဲ့စုံနေအောင် ထမင်းဝိုင်းပြင်ပေး သည်
ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ စားလိုက်ကြတာဆိုတာ အိမ်ရှင်မိသားစု အတွက် ပုဇွန်အမြီးဖျားလေး ပင်မကျန်တော့ပါ ဗိုက် ကားမှ သတိရကြသည် အရှက်ပြေ တစ်ယောက် ကထပြောသည်။
“ဟာ… ဦးလေး တို့အတွက် ဟင်းမကျန်တော့ ဘူး အားနာလိုက် တာဗျာ ခရီးပန်းလာတော့ စားကောင်းကောင်းနဲ့စားလိုက်မိတာ ” “အားနာရမယ့်လူတွေမှ မဟုတ်တာဆရာလေး တို့ရယ် ပုဇွန်က ဒီမှာကပေါ တယ်အဝသာစား ကျွန်တော်တို့ က စားရတာငြီးငွေ့လွန်းလို့စားချင်တော့ ဘူးရယ် ဧည့်သည်တွေလာ မှလတ်လတ် ဆတ်ဆတ်ဖမ်းပြီးချက်ကျွေး တာ ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရ တာမဟုတ်ဘူး အားမနာ ပါနဲ့ ဆရာလေးတို့ စားကောင်းရ င်ညစာလည်း ပုဇွန်ပဲ လုပ်ပေး မယ်လေ”
“ဒီလိုဆိုကောင်း တာပေါ့ ကျွန်တော်မြို့မှာကေ ဈးကြီးတယ် မပြန်ခင်အဝစား သွားရမယ် ” “အို ရတယ်ပါ့ 24နာရီ ထိုင်စားချင် လည်းဖြစ်တယ်” “အာ အဘကလည်းဘယ်ဖြစ် မလဲဗျ တစ်နေ့4ခါပဲ ရမယ်ပေါ့”
ဝင်ပြောလိုက် သူကအိမ်ရှင်ရဲ့သား အငယ်ကောင် အလွန်ဆုံးရှိ မှရှစ်နှစ်ကိုးနှစ် အကြီးကောင်လေး ကဆယ်တစ်နှစ် ဆယ်နှစ်နှစ် အရွယ် အကိုဖြစ်သူနှင့် အိမ်ရှေ့ကွပ်ပျစ်မှာစစ်သား အရုပ်တွေနဲ့ စစ်တိုက်တိုင်းဆော့နေ ရင်းမှအဖေ ကိုလှမ်းပြောခြင်းဖြစ် သည် “အငယ်ကောင် တိတ်ဇမ်း လျှာမရှည် နဲ့ အကြီးကောင်လည်းရှိတာ ကိုး ဘာလို့မရရမှာလဲ” အဖေကလှမ်း မာန်လိုက်သည် “အေးလေဗျာ သူ2ခါ သား2ခါ 4ခါပေါ့ဗျ”
ဟုမကျေမနပ် အငယ်ကောင်လေး ကရေရွတ်နေ သည် အကြီးကောင် ကရယ်သည် ကျွန်တော်လည်း အံ့သြသွား သည် ဒီလက်တောက်လောက်လေးတွေ က ဒီလောက်ပုဇွန်ကြီးတွေ ကိုဘယ်လိုများဖမ်း လာပါလိမ့်ဟု စဉ်းစား ခန်း ဝင်မိသည် မွေးမြူ ရေးကန်တွေကသွား ခိုးတယ်ထင်တယ် တစ်ယောက်ကို 2ခါဆီအလှည့်ကျသွားခိုးကြတာ များ လား အင်း မေးစမ်းကြည့်ဦးမှ “ဦးလေး ကလေးတွေကပုဇွန် ဖမ်းတတ်တယ်လား”
“ဖမ်းတတ်တာပါ့ ကျွမ်းမှကျွမ်း ဒီရွာက ကလေး လူကြီး အကုန်တတ်တယ်” သူငယ်ချင်းများက လည်းဝမ်းသာအားရနဲ့”ကလေးတွေပါတတ်တော့ကောင်း တာပေါ့ ပိုစားရတာပေါ့” ဟုပြောတော့ဘာ မှမပြောဘဲအိမ်ရှင်က ပြုံးပြုံးကြီးေ နေ နသည် “ကဲ ကဲ ဆရာလေးတို့နား ကြဦး ညနေအရက်သောက် ချင်ကြလား” “ဟာ သောက်ချင်တာပေ့ါ ဦးလေး ရယ် များများနဲ့ကောင်းကောင်းလေး လုပ်ပေးနော်” “ရတယ် မပူနဲ့ အိမ်မှာပဲသောက်ကြ ချက်ကြီးဆိုင်ကသွား ဝယ်ပေး ထားမယ်”
“အမြည်းကပု ဇွန်ကင်လေး အသုပ်လေး ထည့်ပေးနော်” “စိတ်ချ လုပ်ပေးမယ် လောလောဆယ်တရေး တမော အိပ် ကြဦး” “ဟုတ် ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်ဦးလေး” အကုန်လုံးတုံးလုံး ပက်လက်ကျောဆန့်ရင်းတေ ခါခေါနဲ့ အိပ်ပျော် ကုန်ကြသည် ကျွန်တော်တစ်ယောက် တည်းသာအိပ်မပျော် ဘဲစဉ်းစားခန်းဝ င်နေသည် ကျွန်တော်က ငါးမျှားရတာ ဝါသနာပါသည် ပုဇွန်လည်းမျှား ဖူးသည် ပုဇွန်ကငါးနဲ့မတူချေ တခါမိဖို့အရေး အကြာ ကြီးမေ့လောက်ေ အာင်စောင့် ရသည် ဒီကလေးတွေမနက် တစ်ပိုင်းတည်းနဲ့ဒီလောက် အများကြီး ဘယ်လိုများ မျှားပါလိမ့် စဉ်းစားမရပေအိမ်အတွင်းခန်းမှ အသံကြိတ် ကြိတ်နဲ့ပြောနေသံကြား၍ နားစွင့်ကြည့် မိသည် အဖေကအငယ်ကောင် ကိုပြောနေခြင်းဖြစ် သည်
“ဟေ့ကောင် သွား ပုဇွန်သွားဖမ်းတော့” “ဟာဗျာ အဘကလည်းမနက်က တစ်ခါသွားပြီးပြီလေ အကိုကြီးသွားခိုင်း “”ဧည့်သည်များတယ် များများရ မှဖြစ်မယ် မင်းပါလိုက်သွား” “မရလောက်တော့ပါ ဘူးဆိုအဘ ကလည်း” “မင်းကို အာ့ကြောင့်မနက်က ကောင်ညှင်းပေါင်းအများ ကြီးစားပါပြော တာကို” “စားတာပဲဗ် “
“ကဲ စကားမရှည်နဲ့ သွားတော့ နေစောင်းတော့ မယ် ငါထမင်းအိုးတည် လိုက်ဦးမယ်” အခန်းထဲမှခြေသံများ ထွက် သွားသံကြားရ သည် ပုဇွန် ကောက်ညှင်းပေါင်း ဘာများပါလိမ့် ဆက်စပ်လို့မ ရချေ ကျွန်တော်လည်းခြေသံ မကြားအောင် တိတ်တိတ်လေး ဖွလျှောက်ပြီးထွက် သွားသောကလေးနှစ်ယောက်ေ နာက် လိုက်လေ သည် ကိုယ်ပါ လာမှန်းသူတို့က မသိကြ ရွာထိပ်ကချောင်း လည်းရောက်ရော ကလေးနှစ်ယောက် က သူတို့ပေါင်လောက်မေ ရာက်တရောက်ေ ရအနက်တွင် ဘောင်းဘီလေးတွေ ချွ တ်သည် ‘အင် ဘာလုပ်ကြတာတုန်းဟ’
ခြုံကွယ်ကေ နချောင်းကြည့်နေရင်း မှ အဖြေကို ဘွင်းဘွင်းကြီးမြင်လေေ တာ့သည် ဖင်လေးတွေကုန်းပြီး အီး ပါနေခြင်းဖြစ်သည် သူတို့ဖင် ကအီး၂တုံးစီထွက် သွားတော့မှ ချက်ချင်းကိုယ်ကို လှည့်ပြီးသူ တို့ပါချ လိုက်သော အီး တုံး ကိုမမှိတ်မသုန် ကသိုဏ်းရှုနေ ကြသည် ၂မိနစ်လောက်ကြာသော အခါ အီးတုံးပတ် လည် တွင်ရေပ လုံ စီထေ နသည် ထိုအချိန်တွင် ကမြင်းမ သားလေးနှစ်ကောင်က ဆတ်ကနဲနဲ့ အီးတုံး ကိုလှမ်း ကိုင်လိုက်သည် သူတို့လက် ထဲတွင်ပါလာသည် မှာအီးတုံးမဟုတ် ပုဇွန်ထုပ်များ ယက်ကန် ယက် ကန်နဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးကျွတ်မတတ် ရုန်းနေကြ သည် သူတို့ပါလိုက်သော အီးတုံးများကို ပုဇွန်များ ကလာ စားကြခြင်း ဖြစ်ပေသည် အာ့အချိန် နှုတ်ခမ်းမွှေးကေ ကာ က်ဆွဲ ဖမ်းခံလိုက်ရခြင်းဖြစ် သည် မနက်ကအားရပါးရစားခဲ့ သည်များကိုပြန်မြင်ယောင် ကာ လည်ချောင်း ထဲမှာပျိူ့တက်လာသည်
ပုဇွန်ခေါင်းထဲ တွင်ချေးတွေပဲရှိ သည်ဆိုသည်မှာ အလကားဟုတ် ဟန်မတူပေ ကိုယ်လည်းအန်လို့ အပြီးသူ တို့လည်းလက်နှစ် ဖက်အပြည့် ပုဇွန်ရနေပြီ ကမ်းပေါ်ပြန်တက် လာကြသောအခါ ကျွန်တော့ ကိုမြင်သွားသည်”ဟာ လေးလေး ဘာလုပ်နေ တာလဲ” အိုးတိုး အန်တန်းနဲ့အကြီးကောင် က မေးသည် “မင်းတို့ပုဇွန်ဖမ်းတာ လိုက် ကြည့်တာ” “ဟီးဟီး လေးလေး ညစာပုဇွန် စားဦးမလား” နှုတ်သွက်သော အငယ်ကောင်ကပြန်မေး သည် “တော်ပြီ ဟေ့ကောင် မစားဘူး” “ဟုတ်တယ် မစားနဲ့ လေးလေး ကျွန်တော် တို့တရွာလုံး မစားဘူး ဧည့်သည်တွေ ပဲကျွေးတာ”
“သေစမ်းဟဲ့ နန္ဒိယ” ?? ဆိုပြီးကိုယ့် နဖူးကိုယ်ပဲပြန်ရိုက်လိုက်မိေ လတော့သည်
ကြှနျတျော ပုဇှနျထုပျဆိုလုံးဝမစားပါ ပုဇှနျအကောငျသေးရငျတော့စားသညျ ပုဇှနျထုပျကိုစိတျနာ သှားသညျ့ အကွောငျးရငျး ကတော့ မအူပငျဘကျကရှာေ လးတဈရှာကို အလုပျကိစ်စတခုကွောငျ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျငါးယောကျ နဲ့ ခရီးထှကျဖွဈရာမှစသညျ တညျးမညျ့အိမျရောကျတော့ အကုနျလုံးခွေ ပဈ လကျပဈနားကွ ရခြေိူးကွနဲ့ နေ့ လယျစာစားခြိနျနီး သှားလပွေီ အိမျရှငျကဧညျ့ဝတျကြေ တာမှ ဟိုဖကျတောငျလှနျသညျ
ပုဇှနျထုပျအကောငျ ကွီးတှအေကောငျသုံး ဆယျလောကျကို တဈဝကျခကျြတဈ ဝကျသုပျ မီးကငျ အခဉျြဟငျး ငပိရညျ တို့စရာနဲ့စုံနအေောငျ ထမငျးဝိုငျးပွငျပေး သညျ
ဗိုကျဆာဆာနဲ့စားလိုကျကွတာဆိုတာ အိမျရှငျမိသားစု အတှကျ ပုဇှနျအမွီးဖြားလေး ပငျမကနျြတော့ပါ ဗိုကျ ကားမှ သတိရကွသညျ အရှကျပွေ တဈယောကျ ကထပွောသညျ။
“ဟာ… ဦးလေး တို့အတှကျ ဟငျးမကနျြတော့ ဘူး အားနာလိုကျ တာဗြာ ခရီးပနျးလာတော့ စားကောငျးကောငျးနဲ့စားလိုကျမိတာ ” “အားနာရမယျ့လူတှမှေ မဟုတျတာဆရာလေး တို့ရယျ ပုဇှနျက ဒီမှာကပေါ တယျအဝသာစား ကြှနျတျောတို့ က စားရတာငွီးငှလှေ့နျးလို့စားခငျြတော့ ဘူးရယျ ဧညျ့သညျတှလော မှလတျလတျ ဆတျဆတျဖမျးပွီးခကျြကြှေး တာ ပိုကျဆံပေးဝယျရ တာမဟုတျဘူး အားမနာ ပါနဲ့ ဆရာလေးတို့ စားကောငျးရ ငျညစာလညျး ပုဇှနျပဲ လုပျပေး မယျလေ”
“ဒီလိုဆိုကောငျး တာပေါ့ ကြှနျတျောမွို့မှာကေ ဈးကွီးတယျ မပွနျခငျအဝစား သှားရမယျ ” “အို ရတယျပါ့ 24နာရီ ထိုငျစားခငျြ လညျးဖွဈတယျ” “အာ အဘကလညျးဘယျဖွဈ မလဲဗြ တဈနေ့4ခါပဲ ရမယျပေါ့”
ဝငျပွောလိုကျ သူကအိမျရှငျရဲ့သား အငယျကောငျ အလှနျဆုံးရှိ မှရှဈနှဈကိုးနှဈ အကွီးကောငျ လေး ကဆယျတဈနှဈ ဆယျနှဈနှဈ အရှယျ အကိုဖွဈသူနှငျ့ အိမျရှကှေ့ပျပဈြမှာစဈသား အရုပျတှနေဲ့ စဈတိုကျတိုငျးဆော့နေ ရငျးမှအဖေ ကိုလှမျးပွောခွငျးဖွဈ သညျ “အငယျကောငျ တိတျဇမျး လြှာမရှညျ နဲ့ အကွီးကောငျလညျးရှိတာ ကိုး ဘာလို့မရရမှာလဲ” အဖကေလှမျး မာနျလိုကျသညျ “အေးလဗြော သူ2ခါ သား2ခါ 4ခါပေါ့ဗြ”
ဟုမကမြေနပျ အငယျကောငျလေး ကရရှေတျနေ သညျ အကွီးကောငျ ကရယျသညျ ကြှနျတျောလညျး အံ့သွသှား သညျ ဒီလကျတောကျလောကျလေးတှေ က ဒီလောကျပုဇှနျကွီးတှေ ကိုဘယျလိုမြားဖမျး လာပါလိမျ့ဟု စဉျးစား ခနျး ဝငျမိသညျ မှေးမွူ ရေးကနျတှကေသှား ခိုးတယျထငျတယျ တဈယောကျကို 2ခါဆီအလှညျ့ကသြှားခိုးကွတာ မြား လား အငျး မေးစမျးကွညျ့ဦးမှ “ဦးလေး ကလေးတှကေပုဇှနျ ဖမျးတတျတယျလား”
“ဖမျးတတျတာပါ့ ကြှမျးမှကြှမျး ဒီရှာက ကလေး လူကွီး အကုနျတတျတယျ” သူငယျခငျြးမြားက လညျးဝမျးသာအားရနဲ့”ကလေးတှပေါတတျတော့ကောငျး တာပေါ့ ပိုစားရတာပေါ့” ဟုပွောတော့ဘာ မှမပွောဘဲအိမျရှငျက ပွုံးပွုံးကွီးေ နေ နသညျ “ကဲ ကဲ ဆရာလေးတို့နား ကွဦး ညနအေရကျသောကျ ခငျြကွလား” “ဟာ သောကျခငျြတာပေ့ါ ဦးလေး ရယျ မြားမြားနဲ့ကောငျးကောငျးလေး လုပျပေးနျော” “ရတယျ မပူနဲ့ အိမျမှာပဲသောကျကွ ခကျြကွီးဆိုငျကသှား ဝယျပေး ထားမယျ”
“အမွညျးကပု ဇှနျကငျလေး အသုပျလေး ထညျ့ပေးနျော” “စိတျခြ လုပျပေးမယျ လောလောဆယျတရေး တမော အိပျ ကွဦး” “ဟုတျ ကြေးဇူးတငျပါ တယျဦးလေး” အကုနျလုံးတုံးလုံး ပကျလကျကြောဆနျ့ရငျးတေ ခါခေါနဲ့ အိပျပြျော ကုနျကွသညျ ကြှနျတျောတဈယောကျ တညျးသာအိပျမပြျော ဘဲစဉျးစားခနျးဝ ငျနသေညျ ကြှနျတျောက ငါးမြှားရတာ ဝါသနာပါသညျ ပုဇှနျလညျးမြှား ဖူးသညျ ပုဇှနျကငါးနဲ့မတူခြေ တခါမိဖို့အရေးအကွာ ကွီးမလေ့ောကျေ အာငျစောငျ့ ရသညျ ဒီကလေးတှမေနကျ တဈပိုငျးတညျးနဲ့ဒီ လောကျ အမြားကွီး ဘယျလိုမြား မြှားပါလိမျ့ စဉျးစားမရပအေိမျအတှငျးခနျးမှ အသံ ကွိတျ ကွိတျနဲ့ပွောနသေံကွား၍ နားစှငျ့ကွညျ့ မိသညျ အဖကေအငယျကောငျ ကိုပွောနခွေငျးဖွဈ သညျ
“ဟကေ့ောငျ သှား ပုဇှနျသှားဖမျးတော့” “ဟာဗြာ အဘကလညျးမနကျက တဈခါသှားပွီးပွီလေ အကိုကွီးသှားခိုငျး “”ဧညျ့သညျမြားတယျ မြားမြားရ မှဖွဈမယျ မငျးပါလိုကျသှား” “မရလောကျတော့ပါ ဘူးဆိုအဘ ကလညျး” “မငျးကို အာ့ကွောငျ့မနကျက ကောငျညှငျးပေါငျးအမြား ကွီးစားပါပွော တာကို” “စားတာပဲဗျ “
“ကဲ စကားမရှညျနဲ့ သှားတော့ နစေောငျးတော့ မယျ ငါထမငျးအိုးတညျ လိုကျဦးမယျ” အခနျးထဲမှ ခွသေံမြား ထှကျ သှားသံကွားရ သညျ ပုဇှနျ ကောကျညှငျးပေါငျး ဘာမြားပါလိမျ့ ဆကျစပျလို့မ ရခြေ ကြှနျတျောလညျးခွသေံ မကွားအောငျ တိတျတိတျလေး ဖှလြှောကျပွီးထှကျ သှားသောကလေး နှဈယောကျေ နာကျ လိုကျလေ သညျ ကိုယျပါ လာမှနျးသူတို့က မသိကွ ရှာထိပျကခြောငျး လညျးရောကျရော ကလေးနှဈယောကျ က သူတို့ပေါငျလောကျမေ ရာကျတရောကျေ ရအနကျတှငျ ဘောငျးဘီလေးတှေ ခြှ တျသညျ ‘အငျ ဘာလုပျကွတာတုနျးဟ’
ခွုံကှယျကေ နခြောငျးကွညျ့နရေငျး မှ အဖွကေို ဘှငျးဘှငျးကွီးမွငျလေေ တာ့သညျ ဖငျလေးတှကေုနျးပွီး အီး ပါနခွေငျးဖွဈသညျ သူတို့ဖငျ ကအီး၂တုံးစီထှကျ သှားတော့မှ ခကျြခငျြးကိုယျကို လှညျ့ပွီးသူ တို့ပါခလြိုကျသော အီး တုံး ကိုမမှိတျမသုနျ ကသိုဏျးရှုနေ ကွသညျ ၂မိနဈလောကျကွာသော အခါ အီးတုံးပတျလညျ တှငျရပေ လုံ စီထေ နသညျ ထိုအခြိနျတှငျ ကမွငျးမ သားလေးနှဈကောငျက ဆတျကနဲနဲ့ အီးတုံးကိုလှမျး ကိုငျလိုကျသညျ သူတို့လကျ ထဲတှငျပါလာသညျ မှာအီးတုံးမဟုတျ ပုဇှနျထုပျမြား ယကျကနျယကျ ကနျနဲ့ နှုတျခမျးမှေးကြှတျမတတျ ရုနျးနကွေ သညျ သူတို့ပါလိုကျသော အီးတုံးမြားကိုပုဇှနျမြား ကလာစားကွခွငျး ဖွဈပသေညျ အာ့အခြိနျ နှုတျခမျးမှေးကေ ကာ ကျဆှဲ ဖမျးခံလိုကျရခွငျးဖွဈ သညျ မနကျကအားရပါးရစားခဲ့ သညျမြားကိုပွနျမွငျယောငျ ကာ လညျခြောငျး ထဲမှာပြိူ့တကျလာသညျ
ပုဇှနျခေါငျးထဲ တှငျခြေးတှပေဲရှိ သညျဆိုသညျမှာ အလကားဟုတျ ဟနျမတူပေ ကိုယျလညျးအနျလို့ အပွီးသူ တို့လညျးလကျနှဈ ဖကျအပွညျ့ ပုဇှနျရနပွေီ ကမျးပျေါပွနျတကျ လာကွသောအခါ ကြှနျတော့ ကိုမွငျသှားသညျ”ဟာ လေးလေး ဘာလုပျနေ တာလဲ” အိုးတိုး အနျတနျးနဲ့အကွီးကောငျ က မေးသညျ “မငျးတို့ပုဇှနျဖမျးတာ လိုကျ ကွညျ့တာ” “ဟီးဟီး လေးလေး ညစာပုဇှနျ စားဦးမလား” နှုတျသှကျသော အငယျကောငျကပွနျမေး သညျ “တျောပွီ ဟကေ့ောငျ မစားဘူး” “ဟုတျတယျ မစားနဲ့ လေးလေး ကြှနျတျော တို့တရှာလုံး မစားဘူး ဧညျ့သညျတှေ ပဲကြှေးတာ”
“သစေမျးဟဲ့ နန်ဒိယ” ?? ဆိုပွီးကိုယျ့ နဖူးကိုယျပဲပွနျရိုကျလိုကျမိေ လတော့သညျ
Previous Article နယ်နင်ဒဏ်ပေးထားသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား တစ်ဦးမြန်မာနိုင်ငံ သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာ
Next Article ကွက်ခိုင်တွင် ကျေးရွာ အနီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား လာနေ သည့်အတွက် မြို့နဲ့နီးရာ ကို ကျေးရွာသားများ ထွက်ပြေး